साहित्य-सागर: March 2009
मनलाई तरलतामा ढाल्न नसकिदो रै'छ
पत्थर बनि सके पछि गाल्न नसकिदो रै'छ
हेर्न खोज्छु छैनन् फाट्या तर भित्र छिया-छिया
सङ्गालेर फेरि उस्तै टाल्न नसकिदो रै'छ
चोट त्यति आलो हैन बल्झि रहन्छ पल-पल
दुखेको घाउ मनै मनमा पाल्न नसकिदो रै'छ
अन्धकारले छ्याप्पै छोप्यो मनका चारै कुनाकानी
निभि गाको दियो फेरि बाल्न नसकिदो रै'छ
हिउचुली झै उचालिए पीर ब्यथाका खाटाहरु
जति भारी भए पनि फाल्न नसकिदो रै'छ
Posted by डिआर निश्छल at 4:41 AM No comments:
स्रस्टासंग अन्तरंग कुराकानी -मार्च २००९
म स्वतन्त्र लेखन नै मन पराउछु । -केदार श्रेष्ठ "गगन"
♣ यहाँलाई साहित्यसागरमा हार्दिक स्वागत छ।
-धन्यबाद छ निश्छल जी।
♣ कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ?
-आफ्नो जिवन बिताउन चाहिने आधारभूत आवस्यकता जुटाउनको लागि यूएईको एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्छु र बाकी रहेको समय अध्यायन र लेखनमा खर्चेको छु।
♣ तपाईको साहित्यिक यात्रा कता तिर जादैछ? अचेल साहित्य क्षेत्रमा तपाईले कसरी सक्रीयता देखाइरहनु भएको छ?
-भने नि निश्छल जी। हामी बिदेशमा छौ । जहा गए पनि मान्छेलाई खानु लाउनु पर्छ । त्यस्को लागि काम गर्नै पर्दछ । त्यसबाट बचेको समय साहित्य तिर खर्चिने गरेको छु । हाल म अन्तराष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज यूएई केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य छु । यस अनेसासले आगामी भनौ जयन्तीको अवसरमा गीत,गजल र कबिता सङ्ग्रह निकाल्दैछ । त्यसको लागि गीत, गजल र कबिता सङ्कलन गर्ने काम हुदैछ।
♣ शुरुमा यो साहित्य क्षेत्रमा आउन कसरी प्रेरित हुनु भयो?
-रहरले नै भनु न ।
♣ नेपाली साहित्यको धेरै बिधाहरु मध्ये कुन् बिधामा बढी तपाईले कलम चलाउनु हुन्छ?
-पहिले कबिता बाट शुरु गरे । पछि कबिता सङ्ग सङ्गै गीत,गजल र कथामा पनि मैले आफ्नो कलम चलाउने गरेको छु।
♣ मोफसलको साहित्यलाई राजधानीमा बसेर लेख्नेहरुले खिल्ली उडाउछन् रे। यो सत्य हो?
- हा..हा.. हा.. गजबको प्रश्न सोध्नु भयो निश्छल जी तपाईले त! यसो भनौ-राजधानीमा बसेर लेख्नेहरुले हैन,राजधानीमा बसेर छाप्नेहरुले चाहि पक्कै खिल्ली उडाउछन्।
♣ तपाईलाई साहित्य सिर्जना गर्दा के कस्ता पात्र र बिषयबस्तुले प्रभाब पार्छ?
-लेख्न त काल्पनिक पात्र र बिषयबस्तुमा लेख्ने गरिन्छ तर देखे भोगेकै यथार्थजन्य पात्र र बिषयबस्तुहरुले नै बेसी प्रभाब पार्छन्।
♣ राष्ट्रले स्रस्टाहरुलाई अन्याय गरे जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
-त्यसो नभनौ निश्छल जी । बेवास्ता चाहि पक्कै गरेको हो ।
♣ बिश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यको स्थान कहा नेर छ?
-उनीहरु दौडन सक्छन् तर नेपाली साहित्य बामे सर्दैछ ।
♣ परिबर्तित नेपालको यो अवस्थामा नेपाली साहित्य कस्तो हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
-प्रतिपक्ष हुनु पर्छ किनकी नेताहरुले बाटो बिराउलान् कि भनेर खबरदारी गर्न सक्ने किसिमको हुनु पर्छ।
♣ अहिलेको नेपाली साहित्यमा देशको राजनीति अटेको छ?
-अटेको छ धेर थोर। तर राजनीति पूर्ण रुपमा अटाउनको लागि राजनीति स्थिर हुनु पर्छ।
♣ तपाईको लेखनीलाई कुन् साहित्यको धार वा बादले डोर्‍याउछ?
-सिर्जना गर्नको लागि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। जति स्वतन्त्र हुदा सिर्जित सिर्जना खुलेको हुन्छ, त्यति नियम र बन्धनमा बधिएर लेखिएको सिर्जना खुलेको हुदैन जस्तो लाग्छ मलाई । त्यसैले म स्वतन्त्र लेखन नै मन पराउछु ।
♣ अहिले सम्म तपाईले पढ्नु भएको कृतिहरु मध्ये कुनै कृति छ जसले तपाईको मन छुन सफल भयो र किन?
- अ... थुप्रै छन्। रुपमति,मुनामदन,बसाइ,राष्ट्र निर्मता, मुटुको ब्यथा जस्ता कृतिहरुले मेरो मन छोएका छन्। यसको बिषयबस्तु र पात्र छनोट उत्कृष्ट छ ।
♣ एउटा सर्जकले एउटै रचना बिभिन्न वेबसाइटहरु र पत्रपत्रीकाहरुमा छपाउनुलाई साझा पाठकहरुले कसरी हेर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
- सामान्य रुपमा हेरिनु पर्छ । पाठकको लागि सर्जकले लेख्छ । एउटा सर्जकको धेय हुन्छ आफ्नो रचना धेरै भन्दा धेरै पाठकहरुले पढ्न पाऊन्।
♣ तपाईको प्रकाशित कृतिहरु नि?
'जिन्दगीका अनुभूतिहरु','सपनाको सन्सारबाट नियाल्दा','क्षितिज पर' मेरो प्रकाशित भैसकेका कृतिहरु हुन्।
♣ साहित्य के हो तपाईको बिचारमा?
- एकै शब्दमा भन्नु पर्दा ज्ञानबर्द्दक खुराक।
♣ समग्र नेपाली साहित्यमा डायोस्परिक साहित्यले कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई?
-एकदमै ठूलो भूमिका खेलेको छ ।डायोस्परामा बस्ने स्रस्टाहरुले लेखेका पुस्तकहरु पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई केही दिन सक्ने खालका छन् ।
♣ तपाईको भाबी लक्ष्य र योजना के छ?
-'मेरो अनलाईन साथी प्रीतिका' (कथा सङ्ग्रह) र 'आफ्नै भूमिलाई सम्झिएर' (कबिता सङ्ग्रह) प्रकाशन गर्ने सुरमा छु। अरु खासै त्यस्तो केही छैन ।
♣ अन्तमा तपाई पाठकहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ?
-नेपाली साहित्यलाई माया गरौ। नेपाली लेखकले लेखेका पुस्तकहरु किनेर पढिदिनुस् र आफ्नो प्रतिकृया दिई साहित्यकार र साहित्यलाई मलजल गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु।
Posted by डिआर निश्छल at 4:33 AM No comments:
उल्टै लाग्छ आफैंलाई, अरुलाई हान्छु भन्दा
निर्दोशलाई बाँध्न खोज्दा , आफ्नै खुट्टो नेलमा पर्छ
आफ्नै जमिन धस्किने छ , सबको खुट्टो तान्छु भन्दा
पराजय निश्चित छ, वैर गर्र्यौ सबै सित
भासिने छौ तिमी आफैं, एक्लै पहाड थाम्छु भन्दा
Posted by डिआर निश्छल at 4:40 AM No comments:
ननिभ्ने दिप हो, हाम्रो माया प्रिती
हासी-हासी जिबन बिताउ, मरे हुन्छै मिटी।
दु:ख सुख जिन्दगीको, जिउने मिठो आधार
जन्म-जन्म रहन्छ माया, इतिहास भै अमर
नसुक्ने खोला हो, हाम्रो प्रेम कहानी
हासी- हासी जिबन बिताउ, मरे हुन्छै खरानी।
माया ठूलो संसारमा, हिरा मोती भन्दा
मरेर नि बाचेका छन् , मायामा ज्यान दिदा
नरोकिने यात्रा हो, युगै युग भरी
हासी-हासी जिबन बिताउ, लानु के छ मरी।
-अस्टिन , अमेरिका
Posted by डिआर निश्छल at 12:10 PM No comments:
बहकिने मनको पनि बह फरक भएपछी ,
बराबर हुन्न आँसु गह फरक भएपछी ।
देख्दिन म कोही पनि पुर्णिमाको चकोर झैँ,
कस्ले हेर्छ ? जुनेलीलाई चह फरक भएपछी ।
रस खाई मौरी पनि भुल्दो रैछ फूललाई,
हरेक फूलै पिच्छे उस्को मह फरक भएपछी ।
मेरो मन्ले तिमी भित्र सकेन है पौडी खेल्न,
तिम्रो मन्को दह भित्र रह फरक भएपछी ।
ढिलै भए पनि आज एउटा कुरा बुझेँ मैले,
नजोडीदो रैछ मन तह फरक भएपछी ।
कार्यालय भित्र फाइल रोक लागेपछी,
पास गर्छ हाकिमले भोक लागेपछी ।
काम हुन्छ तपाईंको,खल्ती छाम्नु भयो भने,
अड्किदैन त्यस्को हातको तोक लागेपछी ।
सुन खान पायो भने नून बिर्सिदिन्छ उस्ले,
होटेलमा व्हिस्की,बियर,कोक लागेपछी ।
सजिलो छ, हामीलाई पनि आज भोली,
कानूनको ठेली उस्लाई जोक लागेपछी ।
जात,धर्म,ईमान,जमान,पैसा जम्मा भई
के हुन्न र ? एकै ठाउँमा सबैथोक् लागेपछी ।
Posted by डिआर निश्छल at 12:34 PM No comments:
-केदार श्रेष्ठ 'गगन '
वेहुली अन्मिएको घर मन
र परदेशिएका मायालुहरुको खोजीमा गाइने
असिमित गीतहरुको अन्तिम अन्तरा ।
-भीमस्थान- ५, सिन्धुली
Posted by डिआर निश्छल at 11:43 AM No comments:
यहाँबाट बिहानै हिँड्ने योजना बनाएअनुसार चिया पिएर सबै जना माक्पाको उकालो लाग्यौं । स्थानीय व्यक्तिहरू यस ठाउँबाट एैसेलुखर्क २ घण्टामै पुग्न सक्ने रहेछन तर हामीलाई भने २ घण्टामा पार गर्न निकै हम्मे पर्ने भयो । केही समयपछि नै तिर्खाले सतायो धारोमा प्यासको धित मायौ र त्यसपछि माक्पाको आधी उकालोमा पुग्ने पहिलो प्रयत्न गर्यौ । हामी सिस्टरहरूसँग भएकोले पनि हिडाई सहज भयो । त्यस विहान मेनुका राई कहाँ पुग्नु थियो बल्ल बल्ल पुग्यो । हाम्रै स्टाफ भएकोले परिवारमा घुलमिल हुन बेर लागेन । हल्का विश्रामपछि बिहानीको खाना त्यहाँ खाएर हामी माक्पाको बाक्लो बस्तीमा पुग्यौं । त्यहाँ उच्च मा। वि., हुलाक, हेल्पो पोटार मन्दिर आदिले हामीलाई कता कता बजारको अनुभव गरायो । त्यस ठाउँमा समाजसेवी दानविर क्या. मानबहादुर राईलाई पनि भेटयौ । उहाँ मेरा पिता तुल्य व्यक्ति साह्रै मिजासिला र दृढ ईच्छाशक्ति भएको पायौं ।
हामीहरू २ दिन लगाएर आएको यो स्थानको वर्णन गर्न गाह्रो छ । हामीले दिक्तेलबाटै देखिने केही हिम चुचुराहरू जे जस्तो अवस्थामा देखिन्थे यहाँबाट पनि सोही अवस्थामा अर्थात सम दुरि जस्तो लाग्दा अचम्म लाग्यो र मेरा मनको भ्रम हिमालको काखैमा छु भन्ने हटेर गयो । करिब २०७० मि। को उचाईमा रहेको यो रमणिय ठाउँ जाडो भने ज्यादै बढि महसुस भयो । हाम्रो प्रतिक्षामा रहनु भएका विशेष गरि लोक नेपालका अध्यक्ष धनकुमार राई लगायत स्थानीय संघ सस्थाका व्यक्तित्वसँग भेट हुँदा न्यानो अनुभव भयो । चार दिनका आँखा एवं स्त्रीरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरको प्रारम्भ भोलीदेखि हुने कुरा प्रचार प्रसारको माध्यमबाट थाहा नै थियो । शिविरको तैयारी पूरा भएको हामीले पुग्दा खेरि नै थाहा पायौं । श्री त्रिभुवन उच्च मा. वि. को प्रागणमा सञ्चालन भएको पाइयो । हाम्रो टोलीसँग आँखा अस्पतालको टोलीको भेटपश्चात निकै खुसि लाग्यो । टोलीका साथीहरू आˆनो आˆनो धुनमा रहेको देखे पनि मलाई भने प्राकृतिक सौन्दर्यले आकषिर्त गराई रहृयो । हिमाली भाग वनपाखा जीवनशैली साह्रै लोभलाग्दो थियो । विधिवत कार्यक्रम सुरू भएपछि चार दिनमा हामीले करिब १५०० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्‍यौँ ।
(साभार: गोरखापत्र )
Posted by डिआर निश्छल at 11:32 AM No comments:
सेता भित्ता सेता पर्दा र सेता वेडहरु । सेतै कपडा पहिरेका डाक्टर नर्सहरुको आहोरदोहोर । यो सेताम्मे संसार अर्थात अस्पताल कहिलेकाही आफै भुत बनेर तर्साउँछ । पाकेका, दुखेका, पोलेका,छटपटीका , वेचैनीका अनेक भित्रि बाहिरी रोगहरुले दर्दनाक बनाएको हुन्छ वातावरणलाइ । यसैविच बसुधा पल्टिएकी छ । एउटा बेड भरेर अर्थात अस्पताललाइ पुर्णता दिलाएर । यहाँको बसाइ कसैको लागि पनि सुखद हुदैन तथापी रोग निवारणको लागि सुन्दर भविष्यको प्रतिक्षामा राम्रै मान्नुपर्छ । हुन त वसुधाको यो अस्पताल बसाइ पहिलो पटक होइन । उसले जीवन भोगाइको एक चौथाइ समय अस्पतालभित्रै विताएकी हो तर किन हो यसपटक उसको छटपटी बढेको छ तर किन कसैले अन्दाज लगाउनै सकेको छैन बोलक्कड बसुधा यसपटक चुपचाप निराश र मायालु देखिएकी छ । डाक्टरहरुको अनुसार उनको पेटमा खरावी देखिएको छ र चाडै निको हुन्छ पनि । उसको अनुहार आशाले कहिलेकाही उज्यालिन्छ र ऊ अस्पतालका सिलिङ्गहरु गन्न थाल्छे ।
"तिमी उता जाऊ यो महिलाहरुको वार्ड हो ।" वार्डमा हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । झुस्स दारी, बिग्रिएको फोहर कपाल, दुब्लो शरिर सेतो पट्टी बाधिएको टाउको एउटा विचित्रको शरिर उताउता दैडिरहेकोछ । केही हराए झै कुनै खोजिकर्ता झै । सुने अनुसार उसको दिमागी हालत ठिक छैन त्यसैले यो विचित्रको मानव शरिर लापरवाह ढंगले कसैलाइ नटेरी दौडिरहेकोछ । वार्डका सम्पुर्ण शक्ति नस्र कुचिकार विरामी कुरुवा लगाएर उसलाइ बाहिर निकालिदैछ । सबै विरामी उसैलाइ हेरेर डराइरहेका छन् । अस्पतालको भित्ता थर्कने गरी 'बाहिर जा' भन्दै झम्टिरहेका छन् । बसुधा एकनाससँग हेरीरहेकी छ कुनै प्रतिक्रिया विना ।
बसुधा सर्घषशील नारी हो । जीवनका अनेक रंग भोगेकी छ देखेकी छ उसले । त्यसैले त ऊ सधै हौसला साहस र प्रेरणा बन्थी सबैको । सबैसँग रमाइलो गर्ने बानी थियो उसको तर आजकल ठिक विपरित देखिदै गएकी छ ऊ । उसले यसै अस्पतालको बेडहरुका जीवनका उर्वर समयहरु कटाएकी थिई । अहिले त उसको पेटमा सानो समस्या मात्र देखिएको हो पहिले गरिएका अपं्रेसनका अगाडी । तर किन हो उ आत्तिएकी छ निन्याउरिएकी छ, कायल बनेकी छ । डाक्टरहरुले उसलाइ अप्रेसन थिएटरमा ल्याउन भनिसकेका छन् उ पटक्क मानिरहेकी छैन । सबै चिन्तित देखिएका छन् । बल्लतल्ल हजार प्रश्नहरुको उत्तर फ्याकी उसले "शलिल आउछ अनि ।"
शलिल उसको भदा । उसका दाइ भाउजु भदा भदैनी सबै आइपुगिसके शलिल बाहेक । शलिललाई होस्टल राखिएकोछ राम्रो पढाइको लागि । ऊ आएन, एउटा बच्चा आएन भनेर अप्रेशनै रोक्नु के काइदा हो सवैजना सम्झाइरहेका छन् । ऊ चुपचाप टारीरहेकी छ । उसकी भाउजु पनि अजिवकी छ । दुइ ओटी छोरी र अर्को लाठे छोरालाइ आफुसँगै राखेर कान्छो छोरोलाइ कसरी होस्टलमा राख्न सकेकी हो ? फेरी त्यति वास्ता पनि गर्दिन । त्यहाँ यदाकदा कुरा निस्किरहेको छ आफ्नै आमालाइ त चासो छैन यो फुपु भनाउदीले किन मरिमेटेकी हो ? फेरी अप्रेशनै नगर्ने यो कत्रो प्रतिक्षा हो ? तर बसुधालाइ यस्ता टिप्पणीप्रति कुनै चासो नै छैन । उ यन्त्रवत सुनिरहेकी छ मात्र सुनिरहेकी छ ।
बसुधा गाँउको स्कुलमा पढ्थी । बाबु सानैमा वितेकाले आमा र दाजु सँगै दुखसुख गर्दै उ हुर्किइ । पछि दाजुहरु शहर पसे, उतै घरजम गरे, गाउँबाट हराए उ आमासँगै थिइ । गाउँगाउँमा क्रान्तिको लहर उठ्दै थियो । मुक्तिका पाठ भट्ट्याइन थालेको थियो । यहि लहरमा होमिएर ऊ छापामार बनि । कठिन कठिन घडिसँग लड्नको लागि छापामार हुनु कुनै खेल होइन तर उ तयार भइ र भुमीगत भइ । केही समयपछि उसले ''जनतान्त्रिक विवाह' गरि भन्ने हल्ला चलेको थियो । जनयुद्धका कथाहरु लम्बिदै गए । मुत्यु, हत्या, अपहरणका लामहरु तन्किदै थिए । एकाएक बसुधा पार्टि नै छाडेर काठमाडौं पसि । अनेक श्रृखलित विश्रृखलित मार र पिडामा पेलिएर आमाको पनि मृत्यु भयो । त्यसपछि त बसुधाको कुनै अत्तोपत्तो गर्नेपनि कोही बाकि रहेन । उसले विहे गरेकी हो कि होइन भन्नेसम्म पनि कसैसँग किटानी थिएन । उ दाजुभाउजुसंगै बस्छे रे भन्ने सम्म मात्र सुनियो ।
त्यससछि बसुधा बसुधा कै रुपमा स्थापित भई अर्थात सानेतिनो काम गरेर जीवन घिसार्दै गई । न उसले कहिल्यै आफ्ना यौवनका कुराहरु कसैसँग बाँडी न त जनयुद्धका क्षणहरु सघर्ष र कठिनाइहरु कसैलाइ सुनाइ तर रमाइलो गर्थि भिन्न तरिकाले । ऊ बेलाबखत बिरामी परिरहन्थि । एकपटक उ आफैले बोकेको राइफल पड्केर आन्द्रै सम्म प्वाल पारेको थियो । बुच्ने आशै थिएन तर उ बाँची भगवानले बचाए भन्नुपर्छ । आफ्नो कोही नभएर पनि उ सधैं परिश्रम गर्थी ।
"कस्तालाइ अस्पतालभित्र पस्न धौ होला त्यो पालेको टाउको फुटाउनु पर्ने । "
ताली ताली । अव हामी अर्का कमरेडको प्रतिक्षा गरौं । "
वीर हस्पिटलको फिमेल सर्जिकल वार्ड फेरि डगमगायो । कारण अघि कै अजिव विरामी लालसलाम गर्दै हालखबर सोध्दै बेडबेड चहारीरहेको थियो । बसुधाले पनि एकपटक त्यस अनौठो विरामीलाइ हेरी अनि आखा चिम्लदै कुना पट्टि फर्किइ । बसुधाको अप्रेशन स-यो ।
भोलिपल्ट बसुधा झन् निन्याउरीएकी थिई । डाक्टरहरुले टाउको छामे । थर्मोमिटरले ज्वरो नापे, स्टेथेस्कोपले ढुकढुकी सुने । विल्कुल सामान्य थिइ ऊ पेटको थोरै दर्द बाहेक । अनायासै "मलाइ पेट होइन छाति दुखेको छ" भन्न थाली ऊ । डाक्टर अचम्म परिरहेका थिए । उ भयभित हुदै "त्यो मान्छे कता गयो?" सोधिरहन्थि । कुनापट्टी फर्केर आशु पुछिरहेको पनि देखियो ।
"शलिल मेरो बाबु ।" ऊ बर्बराउन थालेकी थिई । अव भने आफन्तहरु पनि बसुधाको छातीमै खरावी छ की भनेर डराउन थालेका थिए । भुतभुताउदै आत्तिदै उसकी भाउजु शलिललाइ लिन होस्टलतिर दगुरी । उपस्थितहरुकावीच मौनता छायो । डाक्टरहरु पनि भिन्न परिस्थिती सृजना हुन पुगेकोले जिल्ल परेका थिए । ऊ झन्झन् बर्बराउन लागि ।
"त्यो मान्छे खै त्यसले केही खायो शलिल आएन अनि तपाईहरु किन एकोरिहिनुभएको नी म ठिक छु । मेरो छाती पोल्न कम हुदै गएको छ ।" ऊ यस्तै-यस्तै बर्बराइरहेकी थिइ ।
"मेरो मुक्ति यही हुनुपर्छ । मेरो जीवनको सार्थकता यहि भित्र हराएको छ पत्ता नलगाइ म जान्न । " उ अडिग । केही नलागेर प्रहरी गुहारिएकोछ उसलाइ बाहि-याउन । विरामी कुरुवा अझ भनौ अस्पताल पुरै अनौठो सन्त्रास विच गुजि्ररहेको छ । सवै अत्तालिएका छन् । हडवडाएका छन् । उता बसुधा छाति थिचेर कराउन थालेकी छ । राधाले शलिललाइ लिएर आइपुगिसकिछन् । शलिललाइ देखेर बसुधाका आखा धपक्क बले । अनायसै खुम्चिए पनि त्यस मान्छेको मनोदशामा । जे होस विस्तारै ऊ आफन्तहरुसँग कुरा गर्न थालेकी थिइ ।
पर्सिपल्ट बसुधा आनन्दित मुद्रामा निदाइरहेकी थिइन् । बच्चो शलिल एउटा टुक्रो कागज लिएर दौडिरहेको थियो । जहाँ लेखिएको थियो - "मेरो भविष्य ! छाति यति पोलिरहेको छ की लाग्दैछ अव म बाँच्दिन । जीवनको सत्यता लुकाएर जाँदा मेरो आत्मा पनि छट्पटाउने छ । हुनत अहिले तिमी केही बुझ्दैनौ बुझ्ने बेलामा सायद म तिमीसंग रहन्न । त्यसैले जादाजादै तिमिलाइ त्यो सत्यता नबताइरहन सकिन । तिमी मेरो छोरा हौं मेरो आफ्नो रगत………। अनि अर्को भयानक सत्यता तिम्रो बाबु त्यो व्यक्ति हो जो मुक्ति खोज्दै होस गुमाएर घुमिरहेको छ । मलाइ माफ गर मेरो बाबु ! म जादैछु सदासदाको लागि तिमी र तिम्रो अभागि बाबुभन्दा धेरै टाढा ।
-तिम्ले एकपल्ट पनि नपुकारेकी "तिम्री अभागी आमा"
-कल्याणपुर ७, नुवाकोट
हाल: शंकरदेव कलेज काठमाडौं
Posted by डिआर निश्छल at 11:07 AM No comments:
मेरो देश,तिमी र म
पल्किएँ भन्थ्यौ तिमी
भ्रमण बर्ष यता मेरो देश घुम्न आउँदा
सल्किएँ भन्थ्यौ तिमी
मस्किएँ भन्थ्यौ तिमी
हिमाल टल्काउँदै दाँतमा
तिम्रो बिदाईको बेला
सी यु एगेन भनिदिंदा
निर्मिमेष मेरा आँखामा
खोलेकी थियौ कण्ठ कोकिल
माया लायो रे तिमीलाई
मेरो देशले- मैले जस्तै,
साँच्चै, पल्किएकी थियौ तिमी
र मलेखुको माछामा
साँच्चै, सल्किएकी थियौ तिमी
र डाँफेको वैंशमा
मसक्क मस्किएकी पनि थियौ तिमी
हाक्पारेमा, साकेलामा र रोधीमा
मकालुसँग,कन्चनजंगासँग र अन्न्पूर्णसँग
कति स्पर्शहरु स्खलित बने होलान्
मनमैथुन बनेर कति सपनाहरुमा
हिमालमा अनुदित तिम्रा दन्तलहर
सूनमा रुपान्तरित तिम्रा केशरासी
टपक्क टिपेर एक थूङ्गा लालिगुराँस
शिरमा सजाएथ्यौ तिमीले
गुराँस फुलेर ढकमक्क
राताम्मे मेरो पहाड जस्तै
फूलेथें म उसैगरी गर्वले
गुराँस जस्तै- पहाड जस्तै
हुन सक्छ तिम्रो स्पर्शले पनि
तिमीले मन पराइदिएको
म र मेरो देश ,
ताजै छ सम्झनापटमा अझै
दिल खोलेर भनेकी तिमीले
मलाई छोएर कसम खाएकी तिमीले
तिमी फेरी फर्केर आउनेछ्यौ
मेरो देश भ्रमण गर्न
तिमी हिंडेपछि -
भ्रमणवर्ष पछि -
मेरो देशले थुप्रै
युद्द वर्षहरु खेप्यो
तर तिमी आइनौ
र कटायो धेरै
र अनेकौं बन्द बर्षहरु
फेरि तिमी आइनौ
सपना जस्तो धमिलो
तिम्रो पुनरागमन खोई...?
कहाँ पत्र,ई-मेल ?
शायद, तिमी यतिबेला
अर्को भ्रमणवर्ष- शान्तिवर्ष
मेरा खुट्टाहरु बन्दी भएका छन्
मेरो साँचो स्वतन्त्रता कैदी भएकोछ
औसत दिनैपिच्छे बन्द हुने
मेरो देशको अस्मिता जस्तै
तिमी हुन नसकेको म
म हुन नसकेकी तिमी
भूगोलको फरक सिमारेखाबाट
मेरो देशको मनोदशा ।
Posted by डिआर निश्छल at 6:23 AM No comments:
'अबिरल' नदी भएर बग्नु पर्दछ तिमीले
खहरेको भेल हुनुहुन्न कहिल्यै
शिशिर बसन्त भएर धर्ती सजाउनु पर्छ तिमीले
उजाड मरुभूमि बनेर 'ब्याकुल' हुनुहुन्न कहिल्यै ।
तिमीले त उद्देश्य र आकांक्षाका पुरक भएर बाँच्नु पर्छ
खिन्नता र बेदनालाई पन्छाएर हाँस्नु पर्छ
तिमी अटल क्षितिज बनेर रंगिनु पर्छ
उदासी र फिक्का नभलाई तिमीले रंगाउनु पर्छ ।
तिमी आशाबादी मात्र हुनुहुन्न
पीडा छ मनमा भनेर रुनु हुन्न
तिमीले त कठोर र शाहसी बनेर अघि बढ्नु पर्छ
सघर्ष र समस्यासँग सधैं लड्नु पर्छ ।
दिवास्वप्न सजाएर भ्रममा फस्नु हुन्न तिमीले
झुठो मायाको पासो कस्नु हुन्न तिमीले
तिमीले त मनुष्यत्वको उदाहरण हुनु पर्छ
तिमीले त 'अबिरल' बग्ने नदी नै हुनुपर्छ ।
Posted by डिआर निश्छल at 6:03 AM No comments:
अहिले म सोंचिरहेकी छु- साँच्ची, मारिया अहिले के गरिरहेकी होली ? सुतिरहेकी होली, काम गरिरहेकी होली, एक्लै होली या निर्कोससँग होली ? केही दिनदेखि म उसको बारेमा धेरै नै सोंच्न थालेकी छु, भनौँ, म एकप्रकारले विचलित छु । हिजो सपनामा पनि मैले उसलाई देखें, ऊ सुतिरहेकी थिई, मैले उसलाई नब्युँझाईकन फर्कन लाग्दा म आफैं ब्युँझिएँ । तीन महिना भयो- मैले उसको इमेल पनि पाएकी छैन, ऊ बेखबर छे र शून्य-शून्य, म उसलाई खोजिरहेकी छु ।
मारिया जोसँग मैले ६ महिनासम्म अमेरिकामा बिताएँ, शुरु-शुरुमा हामी एक-अर्कामा प्रतिस्पर्धीजस्तै थियौं । ऊ राम्री थिई, अत्यन्तै मेहनती, म ऊजति राम्री नभए पनि मेहनती भने थिएँ । एउटा प्रशिक्षणको सिलसिलामा हामी सँगै थियौं । सधैं समयमा गृहकार्य बुझाउने र समयमा कक्षामा आउने-जाने गर्ने हामी नै थियौं । शिक्षकहरूले कहिलेकाहीँ मेरो प्रशंसा गर्दा ऊ ईर्ष्या गरेझैं गर्थी तर उसको प्रशंसा गर्दा म मजाले सही थापिदिन्थें । एक महिनासम्म साधारण हाई-हेल्लोको बोलीचालीमै हामीले बिताएका थियौं । एक रात जब ऊ र म एउटै कोठामा पर्‍यौं, शुरुमा त उसले असजिलो अनुभव गरी । उसले व्यक्त नगरे पनि म कुरा बुझिरहेकी थिएँ । तर, कुराकानीकै क्रममा हामी नजिकियौं । ऊ मेक्सिकोबाट आएकी थिई ।
मेक्सिको अमेरिकाको सिमानामै पर्ने भएकोले मेक्सिकनहरू प्रत्येक दिन ठूलो सङ्ख्यामा कानूनी र गैरकानूनी रूपले अमेरिका छिर्ने गर्छन् । अधिकांश मजदुरहरू मेक्सिकन नै छन् अमेरिकामा । घर बनाउने, बाटो र पुल बनाउने, भनौं धेरै गाह्रो कामहरू उनीहरूबाटै चलेको छ र उनीहरूलाई कानूनी मान्यता दिने कि नदिने भन्ने बहस पनि वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । कोही बसबाट, कोही प्लेनबाट, कोही पानीमा पौडेर, कोही सुरुङ खनेर अनेक गरेर अमेरिकामा छिरेका छन् मेक्सिकनहरू पैसा कमाउन । तर, मारिया कुनै त्यस्तो कामको निम्ति आएकी थिईन । ऊ एउटा प्रशिक्षणको सिलसिलामा आएकी थिई र अमेरिकामा मेक्सिकनहरूको जिन्दगी देखेर हैरान थिई । ऊ भावुक थिई, त्यसैले यस्ता कुराहरूले पिरोलिने गर्थी । भावुकता मानिसको जीवनमा कति पीडादायी हुन्छ त्यो मैले राम्ररी बुझेकी थिएँ, त्यसैले सायद हामी नजिक भएका थियौं ।
समय कसरी गयो पत्तै भएन । एक साँझ फोनमा आधा घन्टासम्म कुरा गरिसकेपछि ऊ शिथिल-शिथिल भएर ओछ्यानमा थचक्क बसी र धेरैबेरसम्म एकोहोरो टोलाइरही । जब मैले उसको परिस्थितिलाई बुझने कोशिस गरें, उसले भावुक भएर सुस्केरा हाल्दै यति मात्र भनी-“म कसैलाई मन पराउँछु, म उसलाई माया गर्छु र धेरै नै चाहान्छु ।”
त्यसपछि मैले उसको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाएँ । ऊ निर्कोस भन्ने केटालाई मन पराउँथी र बेहद चाहन्थे उनीहरू एक-अर्कालाई, तर सँगै बस्न भने सकिरहेका थिएनन् । निर्कोस एउटा राजनीतिक व्यक्ति थियो । उसकी श्रीमतीसँग अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । मारिया एक्लै थिई तर बाबु-आमा, भाइ-बहिनी सबैलाई हेर्नुपर्ने अवस्था थियो । परिवारको एक मात्र सहारा नै ऊ थिई । बाबु खुट्टामा गोली लागेर अपाङ्ग भएको थियो, आमा र भाइबहिनीहरू करिब-करिब बेसहारा अवस्थामा थिए । उसको पनि विवाह भएको थियो तर एक वर्षपछि लोग्नेले छोडेर अर्कै केटीसँग बसेको थियो । उसको लोग्ने मार्कोसले एक वर्षसम्म दिएको दुःख सम्झिएर कहिलेकाहीँ ऊ रुने गर्थी । धेरै बेरसम्म रोइसकेपछि एक दिन उसले भनी- “हिजोआज सम्झिरहेकी छु, म कसरी बसें होला एक वर्षसम्म ? शारीरिक सम्बन्धको विषयलाई लिएर जब हाम्रो झगडा हुन्थ्यो, म पिटिन्थें प्रत्येक रात । जब पिटाइको पीडाले म आँशुमा डुब्थें अनि ऊ सुत्थ्यो मस्तसँग । त्यो एक वर्षको बीचमा मैले लोग्नेमान्छेहरूलाई साँच्चैकै घृणा गर्न थालिसकेकी थिएँ । मैले सोचेकी पनि थिइनँ कि मेरो जिन्दगीमा फेरि कुनै लोग्नेमान्छे आउनेछ र म उसको मायाको पीडामा यतिसम्म गहिरिनेछु ।”
अनायासै ऊ रोई र धेरै बेरसम्म रोइरही । मैले चुपचाप उसलाई हेरिरहें र भनें-“भयो, सुतौं अब । कुनै दिन तिमी निर्कोससँग हुनेछ्यौ र रमाइलोसँग तिमीहरूको जिन्दगी बित्नेछ ।”
उसले नपत्याएझैं गरी मलाई हेरी र भनी-“खै… ? … ?”
‘तिमीलाई आफ्नो मायामा विश्वास छैन, तिमी दोधारमा छ्यौ मारिया…, यसरी जिन्दगी बाँच्न गाह्रो हुन्छ ।’ -मैले भनें ।निर्कोसको फोन आएपिच्छे ऊ भन्ने गर्थी-“म तिमीलाई छुन चाहन्छु, तिम्रो छातीमा टाउको राखेर निदाउन चाहन्छु ।”उसको फोन सुनिसकेपछि म उसलाई भन्ने गर्थें-“मलाई लाग्छ, तिमी उसलाई शारीरिक रूपले बढी मन पराउँछ्यौ, नत्र किन तिमी पटकैपिच्छे भन्ने गर्छ्यौ कि म तिमीलाई छुन चाहन्छु, उसले के भनेर सोच्छ होला तिमीलाई… ?”
यो विषयलाई लिएर उसले मसँग लामो बहस गरी, सकेसम्म मैले पनि तर्कहरू गरें ।
“जब तिमी कसैलाई माया गर्दिनौ भने तिमी कसरी उसलाई छुन सक्छ्यौ ? मेरो मतलब ऊसँग अङ्कमाल गरेर बस्न सक्छ्यौ ? र, तिमी कसैलाई बेहद माया गर्छ्यौ भने कसरी उसलाई नछोई बस्न सक्छ्यौ ?”-उसले भनी ।
“यी सब मानसिक सोचका कुराहरू हुन् ।”-मैले भनें ।
“हो…यी मानसिक सोचकै कुराहरू हुन् ।” उसले सही थापी र भनी -“जब म कहीँ जान्थें म उसलाई पाइतलामा चुम्बन गर्थें, खै, किन हो, उसका खुट्टादेखि टाउकोसम्म सबै अङ्गहरू मेरा लागि उत्तिकै प्रिय छन्, म उसलाई माया गर्छु ।” ‘ऊ भन्दै गई -“तिमीलाई थाहा छ, पहिलोपल्ट जब मैले पाइतलामा चुम्बन गरें, उसले भन्यो- ‘त्यसो नगर, मलाई लाग्नेछ कि तिम्रो मायालाई म लत्याइरहेको हुनेछु ।’ त्यसपछि मैले भनें- ‘होइन, तिमी मेरो मायाको संसारमा उभिरहेको हुनेछौ । त्यसपछि कति चाँडो सहमत भएर उसले मेरो पाइतलामा चुम्बन गरेको थियो ।’”
ऊ रोमान्टिक भई र भनी-“शारीरिक सम्बन्ध भन्ने कुरा राखुँ भनेर हुने कुरा होइन, तिमी कसैलाई साँच्चीकै माया गर्छ्यौ भने तिमीलाई थाहै हुँदैन, तिमीहरूले कतिबेला के-के गर्‍यौ ? कति मान्छेहरू शारीरिक सम्बन्ध राख्नकै लागि वेश्यालय जान्छन् र कतिचाहिँ केटी या केटा फेरी-फेरी होटल या यस्तै ठाउँहरूमा जान्छन्, म त्यस्ता मान्छेहरूलाई घृणा गर्छु ।”त्यसपछि धेरैबेरसम्म हामीले केटीहरूको शोषण र देहव्यापारका कुराहरू गर्‍यौं ।
“साँच्ची, पैसा खर्च गरेर आनन्द लिन जानेहरू त पशु नै हुन्, कुनै भावना नभएका… प्रेमबिनाको सम्बन्ध राख्न सक्ने पशुहरू॥!” -ऊ एक्लै फतफताई ।
“त्यसो भए केटीहरूलाई तिमी के भन्छ्यौ जो त्यस्तो पेसा गरेर बसिरहेका छन् ?” -मैले सोधें ।
उनीहरूको बाध्यता र विवशताको लामो भाषण छाँटी उसले । बहस छोट्याउने कोशिस गर्दै मैले भनें -“हो, त्यस्ता केटीहरू पनि आफूले मन पराएको मान्छेसँग बस्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई भेट्न चाहन्छन् ।”
धेरै सिनेमाका कहानीहरू बटुल्दै मैले उसको कुराहरूमा सहमति जनाएँ । त्यसपछि हामीले प्रेम र रोमान्सको विषयमा लामो कुराकानी गर्‍यौं । यसअघि यस्ता विषयमा कसैसँग कहिल्यै पनि मैले यति लामो समयसम्म कुराकानी गरेकी थिइनँ ।“…मार्कोसले जब मलाई पिट्थ्यो र सम्बन्ध राख्ने कोशिस गर्थ्यो, त्यतिबेला मैले जहिले पनि आफू बलात्कृत भएको अनुभव गरें तर कहिल्यै उसले ग्लानि अनुभव गरेको पाइनँ ।” -उसले अगाडि भनी-“मलाई त्यतिबेला लाग्थ्यो सबै लोग्नेमान्छेहरू त्यस्तै हुन् । उनीहरूलाई सम्बन्ध राख्न भावना, सोचाइ अथवा चाहनाजस्ता कुराहरूले केही फरक पार्दैन ।”
“तिमी कसरी भन्न सक्छ्यौ निर्कोस त्यस्तो छैन ? यति धेरै भावनामा नबग मारिया… तिमी भ्रममा हुन सक्छ्यौ र जब वास्तविकतामा आउनेछ्यौ त्यतिबेला तिमीमाथि र तिम्रा सोचाइहरूमाथि ठूलो धोका भइसकेको हुनेछ, तिमी छाँगाबाट खसेजस्तै हुनेछ्यौ । उही पीडा, उही एक्लोपन… त्यही वास्तविकता तिम्रो जीवनमा दोहोरिनेछ, त्यतिबेला म त तिम्रो साथमा हुनेछैन तर तिमी पुनः दुःखी भएको म सुन्न चाहन्न मारिया !” -मैले भनें ।
उसले एक ग्लास वाइन थपी र भनी- “त्यसो त मान्छेहरूले प्रश्न गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँहरू हामीले छोडिदिएका छौं । हामीले जतिसुकै राम्रो गरौं उनीहरूले कहिल्यै पनि राम्रो भन्ने छैनन् । मानिसहरूले भन्नेछन्- यदि यिनीहरू राम्रा मान्छे भइदिएको भए उसकी स्वास्नीले निर्कोसलाई किन मुद्दा हाली र मलाई मार्कोसले किन छोड्यो ? यो प्रश्न हाम्रो जीवनमा वर्षौंसम्म दोहोरिइरहनेछ । अँ, अघि तिमीले भन्यौ कि निर्कोस पनि त त्यस्तै हुन सक्छ…। तर खै, किन हो, मलाई ऊ धेरै नै फरक लाग्छ । मेरा लागि त ऊ यो विश्वमै एउटा मान्छे हो जो आममान्छेहरूभन्दा फरक छ ।”
मलाई मनमा लाग्यो- मारियाले त्यसो भन्नुभन्दा निर्कोसले भनिदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसपछि उसले मेरो हात समाती र भनी-“आऊ ! म तिमीलाई निर्कोसको एउटा इमेल देखाउँछु ।”
म चुपचाप केटाकेटीझैं उसको पछि लागें र कम्प्युटरको छेउमा गएर बसें । उसले आफ्नो इमेल खोली र मलाई पढ्न भनी । लेखिएको थियोः-‘मारिया ! हिजो तिम्रो फोन आउँदा म एउटा जरुरी मिटिङमा थिएँ । माफ गर मैले तिमीसँग राम्ररी बोल्न पाइनँ । अँ सुन, एउटा कुरा ती मेरा साथीहरू छन् नि इकाल, फ्रोक र नेकहरू तिनीहरू सदाझैं केटीहरूसँग गएका थिए, मेरा लागि पनि भनेर उनीहरूले एउटी नयाँ केटी खोजिदिएका थिए, जसको नाम नेकिला थियो । धेरै राम्री थिई त्यो केटी, कम उमेरकी तर मैले ऊसँग हाई-हेल्लोभन्दा अरू केही गर्न सकिनँ । जब ऊ मसँग टाँसिएर बसी, मेरो जीउ नै चिसो भएर आयो, मैले तिमीलाई सम्झिएँ, म एकदम नर्भस भएँ र उसलाई माफ गर म एक कप चिया खान चाहन्छु भनेर बाहिर निस्किएँ । ऊ अँध्यारी भई र मलाई थाहा थियो ऊ आफ्नो बेइज्जत भएको अनुभव गरिरहेकी थिई । पछि मलाई धेरै ग्लानि अनुभव भयो कि म किन त्यहाँ गएँ ? मलाई साँच्चीकै माफ गर, म साथीहरूको करले गएको थिएँ । र, अब म कहिल्यै जाने छैन । तिमी आएपछि भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्…।’खै, किन हो, उसको इमेल पढेपछि म धेरै खुशी भएँ र भनें-“माफ गर, मैले निर्कोसको बारेमा गलत सोचें, ऊ धेरै राम्रो मान्छे रहेछ र इमानदार पनि ।”
“इमानदार कसरी ?” -उसले प्रश्न गरी ।
मैले भने-“ऊ जहाँ गयो र जे-जे भयो उसले ती सबै कुराहरू तिमीलाई सुनाइरहन जरुरी थिएन, तर उसले सुनायो त्यसैले पनि ऊ तिमीप्रति इमानदार छ ।”
कालो कपाल भएकी, अलिअलि मोटी र अग्ली मारिया झट्ट हेर्दा नेपाली केटीजस्तै देखिन्थी । म ऊसँग आफू नेपाली भएको जति गर्व गर्थें त्यति नै ऊ आफ्नो देशप्रति गर्व गर्थी । उसका कुराहरू सुन्दा लाग्थ्यो मानिसको जीवनस्तर र सोचाइको स्तर पनि झन्डै उस्तै थियो । कहिलेकाहीँ ऊ वाइन खान्थी र वाइन खाएपछि झन् बढी भावुक हुन्थी । म काठमाडौंमा पत्रिका चलाउँथें, ऊ मेक्सिकोमा गैरसरकारी संस्थाले निकाल्ने न्युजलेटर चलाउँथी । महिला आन्दोलनमा हामी दुवैको उत्तिकै रुचि थियो । हामीहरू आ-आफ्नो मुलुकमा भइरहेका गतिविधिहरूबारे प्रत्येक दिन जस्तै चर्चा गर्थ्यौं । त्यतिबेलै मेक्सिकोका राष्ट्रपति भिसेन्ट फक्सले ५२ वर्षको उमेरमा ४७ वर्षीया आफ्नै प्रवक्तासँग विवाह गरेको चर्चा पत्रपत्रिकाहरूले छापेका थिए, यो सन् २००१ अगस्टको कुरा थियो । ‘यो उमेरमा किन विवाह गर्नुभयो ?’ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा राष्ट्रपतिको जवाफ थियो, ‘मेरो अनुहारमा हेर्नुस् सबै कुरा देख्नुहुनेछ ।’ त्यो जवाफमा पत्रकारहरूको टिप्पणी थियो, ‘उनको अनुहार खुशीले भरिएको थियो ।’
हामी महिला आन्दोलनको प्रसङ्गमा जब घरायसी हिंसामा प्रवेश गर्थ्यौं, विश्वमा जताततै स्वास्नीमान्छेको समस्या एउटै हो जस्तो लाग्थ्यो । यौनशोषण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता घटनाहरू त्यहाँ पनि प्रत्येक दिन पत्रपत्रिकामा छापिन्थे । अचम्म लाग्थ्यो, जहाँ पनि उस्तै-उस्तै घटनाहरू । एक दिन मैले भनें-“मारिया ! हेर न, कुनै केटामान्छे हिंसाको सिकार भयो भने बढीमा उसले कुटाइ खान्छ या मारिन्छ, तर केटीमान्छेले भने कुटपिट या मृत्युसँगै यौनशोषणको सिकारसमेत हुनुपर्छ । मलाई यस्ता कुराहरूले अत्यन्तै पीडा हुन्छ ।”
त्यसपछि हामीले सार्वजनिक जीवनमा भएका महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा कुरा गर्‍यौं । मैले भनें-“जतिसुकै चरित्रहीन लोग्नेमान्छे होस् उसलाई बदनाम गर्न बढीमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइन्छ तर जतिसुकै असल महिला होस् उसलाई बदनाम गर्नका लागि उसको चरित्रलाई अगाडि सारिन्छ र चरित्रहीन भनिदिए मात्रै पुग्छ, प्रमाणित गरिरहनुपर्दैन ।”भेदभावको पीडा कहिलेकाहीँ आक्रोश बनेर पोखिँदा हामी निकै उत्तेजित हुन्थ्यौं र हाम्रो छलफलको निष्कर्ष जहिले पनि समानतामा गएर टुङ्गिन्थ्यो ।
एक साँझ मारिया र म कोठामा बसेर यस्तै कुराकानी गरिरहेका थियौँ, उसको नजिकको नाता पर्ने एक व्यक्ति कोठामा आयो र बस्न नपाउँदै रुन थाल्यो । उनीहरू आफ्नो भाषामा कुरा गरिरहेका थिए, मारिया उसलाई सान्त्वना दिइरहेकी थिई । म चुपचाप उनीहरूलाई हेरिरहेकी थिएँ । केहीबेर रोएपछि उसको त्यो नातेदार पेद्रोले लामो श्वास फेर्‍यो र टोलाएर बसिरह्यो ।
“के भयो ?” -मैले सोधें ।
“आज उसकी आमाको मृत्यु भयो आफ्नै देशमा, तर ऊ जान सक्दैन किनभने ऊ त्यहाँ गयो भने फेरि फर्किएर आउन सक्दैन । र, त्यहाँ बसेर के गर्नु उसले कुनै काम नै पाउँदैन, यहाँ त कमसेकम दुःख गरेअनुसार पैसा कमाइरहेको छ । यहाँको एक डलरको मेक्सिकोमा दस पेसो हुन्छ । बेलाबेलामा पैसा पठायो, स्वास्नी, छोराछोरीसँग भेट नभए पनि उनीहरूको समस्या टरेको छ ।” -मारियाले भनी ।
मैले नेपालबाट पैसाकै लागि भारत, कतार, साउदी र अन्य मुलुकहरूतिर भासिने नेपालीहरू सम्झिएँ । आखिर समस्या त हाम्रो पनि त्यही न हो । पैसाका लागि विदेशिएका नेपालीको कतिको घरमा पैसा पुग्छ, कतिको अपाङ्ग शरीर र कतिको त लास नै पुग्ने गरेको छ । मनमा लाग्यो, गरीब हुनु पनि केही होइन । यदि गरिबीले नछोएको भए कति मान्छेले आफ्नो परिवारको साथ छोड्नुपर्ने थिएन । मन त्यसै पीडाले भरियो । पेद्रोलाई ढाडस दिँदै भनें-“नरोऊ पेद्रो ! यस्तै हो, एक दिन त हामी सबै मर्नैपर्छ, जिन्दगीमा जति दुःख गरे पनि आखिर जाने बाटो त सबैको एउटै हो । आज हामी यहाँ छौं, यहाँबाट छु ट्टिएपछि हाम्रो भेट कहिल्यै नहुन पनि सक्छ र भोलि नै हामीमध्ये कसैलाई केही हुन पनि सक्छ, कसलाई थाहा छ र ?’“
पेद्रोले टाउको हल्लाउँदै सहमति जनाएझैं गर्‍यो तर उसका आँखाबाट आँशुहरू रोकिएका थिएनन् ।
अहिले पानी परिरहेको छ र म मारियाको बारेमा सोचिरहेकी छु । ऊ भन्ने गर्थी-“म एउटा बच्चा पाउन चाहन्छु, साँच्ची निर्कोस र मेरो बच्चा भयो भने कस्तो हुन्छ होला ? ठूलो पेट लिएर डाक्टरकहाँ दुवैजना जचाउन गएको, हस्पिटलमा भर्ना भएको, बच्चा पाएको, दूध चुसाएको, निर्कोस र म सँगै बसेर फोटो खिचाएको यी सबै कुराहरू सम्झिएर मन त्यसैत्यसै उत्तेजित हुने गर्छ कहिलेकाहीँ र डर पनि लाग्छ- कतै मेरा यी रहर चाहनामै सीमित त हुने होइनन् ?’“
कति भावुक भएकी थिई मारिया । समय र परिवर्तनको कुरा गर्न उसलाई खुब मन लाग्थ्यो । परिवर्तनकै प्रसङ्गमा एक दिन उसलाई मैले भनें-“तिमीले बच्चा पाउने रहरको कुरा गर्दा मैले सम्झिएँ, मेरी आमा भन्नुहुन्थ्यो- आफ्ना उमेरमा मेरो बुबा र आमाले उज्यालोमा कहिल्यै एक-अर्काको मुख हेर्नुभएन, आँखा जुधाउनुभएन । मेरा फुपूहरू र हजुरआमाका अगाडि मेरो बुबा कहिल्यै आमासँग बोल्नुभएन । र, म अहिले तिमीले गरेको कल्पना अथवा मैले गर्ने कल्पनाजस्तो कुनै योजनाबद्ध तरिकाले जन्मिएकी थिईनँ । प्राकृतिक आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा म अनायासै आमाको पेटमा आएकी थिएँ र पक्कै छोरा जन्मिन्छ भन्ने आशा लिएर भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै मेरी आमाले नौ महिनासम्म मलाई पेटमा राख्नुभएको थियो । जब म जन्मिएँ, उहाँ निकै दुःखी हुनुभयो र घरमा परिवारका सदस्यहरूले केही भन्लान् कि भनेर धेरै बेरसम्म रुनुभयो । तर, उहाँले यसो गर्नुमा उहाँको कुनै दोष थिएन, हाम्रो समाजको छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने भेदभाव नै यसको प्रमुख कारण थियो । कुनै दिन म आफ्नो खुट्टामा उभिने छु र मेरो पनि आफ्नो संसार हुनेछ भन्ने लागेको भए मेरी आमा पक्कै रुनुहुने थिएन । यद्यपि, मैले बाल्यावस्थामा परिवारको अति नै माया पाएँ, लाडप्यारमा हुर्किएँ । अहिले मेरी आमा र मेरोबीचमै कति ठूलो परिवर्तन आएको छ । मेरी आमा उज्यालोमा आफ्नो लोग्नेलाई हेर्न सक्नुहुन्नथ्यो, म आफ्नो प्रेमीसँग खुल्ला सडकमा हात समातेर हिँड्न सक्छु । म अहिले सम्झिरहेकी छु बिना कुनै वार्तालाप, बिनाप्रेम, बिना एक-अर्काको स्वीकृति र सहमतिमा उहाँहरूबीच कसरी शारीरिक सम्बन्ध भयो होला ? कतै त्यो सम्बन्ध मेरी आमाका लागि पीडादायी त थिएन ?”
मैले यसो भन्दा कति गम्भीर भएकी थिई मारिया । उसको संवेदनशील हृदयमा कुनै चोट नलागोस् भनेर म सधैं प्रार्थना गर्छु । ऊ एक किसिमको सार्वजनिक जीवनमा छे, निर्कोस त झन् पहिल्यैदेखि छ नै । मानिसहरू भन्ठान्छन्- सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तिहरूको कुनै व्यक्तिगत जीवन हुँदैन, तर मलाई लाग्छ- यो सब गलत हो । आफ्नो व्यक्तिगत चाहना र खुशी हरेक व्यक्तिको जीवनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । कसैले म सार्वजनिक जीवनमा छु त्यसैले मेरो व्यक्तिगत जीवन छैन भन्छ भने कि त त्यो ढोंगी हो कि त उसले सोचेजस्तो जीवन बाँच्नै पाएको छैन ।
अहिले बेखबर भएकी मारियालाई इमेलमा मैले लेखें :-
यदि तिमीले मलाई बिर्सिएकी छैनौ भने परदेशमा बिताएका क्षणहरू सम्झ, सम्बन्धको दुनियाँमा पनि सम्झनु ± सम्झनु = बिर्सनु हुँदैन रहेछ, त्यसैले मैले तिमीलाई बारम्बार सम्झिरहेकी छु, आशा छ तिम्रो सम्बन्धको सूत्रभित्र अबदेखि बिर्सनु ± बिर्सनु = सम्झनु हुनेछ ।
लेख्न मन लागेको थियो- हामी उभिएको धरातल र हामीले चाहेको संसारबीचको दूरी निकै लामो छ मारिया ! यो पीडादायी दूरी घटाउने क्रममै एक दिन तिमी र म यो संसारबाट टाढा जानेछौं आदि-आदि तर लेखिनँ । अन्त्यमा लेखें :-
मलाई विश्वास छ तिमी अहिले दुःखी छैनौ, जिन्दगी आज खुशी बाँच्नुपर्छ मारिया ! भोलिको दिन कसले देखेको छ र ?
(हालै प्रकाशित कथा संग्रह ‘सम्बन्धहीन सम्बन्धहरु’बाट)
Posted by डिआर निश्छल at 5:05 AM No comments:
फोन गरी जिस्काउनेलाई देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो
बोली सुन्दै मन छोयो भेट्न पाए कस्तो हुन्थ्यो
यै फोनमा माया बस्यो चिनजान हाम्रो भाको छैन
कलेज तिर जाने बाटो छेक्न पाए कस्तो हुन्थ्यो ।
उनको दिलमा मेरो चित्र कोर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो
उनीबाटै उनकै मन चोर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो
न्यानो माया दिन्छु भन्छिन् उन्को रूप देख्या छैन
उनीसँग अँगालिँदै घुम्न पाए कस्तो हुन्थ्यो
विदेशमा आएपछि माया लाउन पाको छैन
उनी रुँदा झर्‍या आँसु पुछ्न पाए कस्तो हुन्थ्यो
मुस्कुराउँदा मस्किन्छिन् रे चन्द्रमाको चाँदनी झै
भरिएका जवानी रस चुस्न पाए कस्तो हुन्थ्यो
Posted by डिआर निश्छल at 2:40 AM No comments:
के फरक छ
साथी र मित्रमा
थाहा छ तिमीलाई -
के थाहा पाउनु
तिमी सोझो गाउँले
गाउँले भएर नै तिमी माइला दाइ
नत्र माइकल ब्रो हुन्थेउ होला नि
साथीको साथ केही क्षणको,
मित्रको साथ युगौयुगको,
यो झूठो रहेछ
यो कुरो थाहा थियो त तिमीलाई ?
आकाश एउटै,धर्ती एउटै
पानी एउटै, माटो एउटै
मैले भनेको बिश्वास लाग्दैन होला
तिमी यो कुरामा त बिश्वास गर्र्छौ हौला नि
गाउँ र शहरको,
शहरको भब्य महल र गाउँको झुप्रो,
कुनै कविको काल्पनिक कविताजस्तै,
आकाशको तारा हेरेर
रमाउने प्रेमि-प्रेमिका वा
भित्तामा सजाइराखेको रोमान्टिक तस्वीर जस्तो
हुन्न रहेछ वास्तविक जीवन,
मायाप्रेमको कुरा गर्दा
शहरको भब्य महल र गाउँको झुप्रोमा
जस्तो फरक छ
त्यस्तै फरक छ मायामा पनि
होइन जस्तो लागेको थियो
हो रहेछ ।
Posted by डिआर निश्छल at 11:47 PM No comments:
देशै जलाई तराई पहाड कति गर्छौ बन्द ।
सबै मिली देश बनाउ छैन कसैलाई पीर
दाजु भाई दिदी बहिनी सबै भए दुश्मन
जनता मारी नेता बन्नेले गरे देशमा शासन ।
लडेका छन् तछाड मछाड बनाई देशलाई बरबाद
Posted by डिआर निश्छल at 2:02 AM No comments:
गास, बास र अलिकती कपास देऊ देशलाई,
अहिल्यै लाश नबनाउ, सास देऊ देशलाई ।
राजनीतिको चोलीभित्र कति बाध्छौ खुम्च्याएर ?
कहिलेकाही चोली खोली, आकाश देऊ देशलाई ।
अन्धकार भित्र धेरै ताड्पिएर बस्नु हुन्न,
बिकासको घाम तापी प्रकाश देऊ देशलाई ।
हरियाली आउन फेरि अर्को ऋतु कुर्नु पर्छ,
अहिले नै बिचार गरी, मधुमास देऊ देशलाई ।
भोलि कहिल्यै आउँदैन,भोलि-भोलि नभन है ?
तिर्खा मेटी थोरै आज, मिठास देऊ देशलाई ।
फेरि बाढी आउन सक्छ, कोशीको झैँ छताछुल्ल,
अलिकती भएपनि, निकास देऊ देशलाई ।
Posted by डिआर निश्छल at 11:16 PM No comments:
किन किन सारा उत्साह भित्र भित्रै गलि रह्यो ।
Posted by डिआर निश्छल at 11:02 PM No comments:
Posted by डिआर निश्छल at 10:52 PM No comments:
छाडिगयौ साथ मेरो माया पनि लिई गयौ
ब्यथाहरु जिन्दगीका धेरै धेरै दिई गयौ ।
ओकलेर फालिएको बिष जत्ती मेरै भयो
घडाबाट निकालेको अमृत सबै पिई गयौ ।
मेरो मात्र फाट्नु रैछ,जिन्दगी यो फाटेकै छ
आफ्नो लागि जिन्दगीको नयाँ चोला सिई गयौ ।
जसो तसो आफ्नो यात्रा बढेकै छ सबैको
तिमी भने सपनाको महलमा जिई गयौ ।
Posted by डिआर निश्छल at 10:11 PM No comments:
थाहा छ तिमी हतारमा छौ-
तिमीलाई धेरै टाढा पुग्नु छ
तर नबिर्स !
यो धर्तीमा हिँड्न
हामीले बनाएका हौं- बाटो !
थाहा छ ब्रह्माण्डलाई-
हतारमा छ पृथ्वी
प्रार्थनारत छन् नानीहरू
कमिला हतारमा छ
अम्बा, निबुवा र सुन्तला वरिपरि
हतारमा छ झुसिलकीरा
संयोगले हामी जन्मियौं यस माटोमा
सँगै उभियौं युद्धका असंख्य मोर्चाहरू
प्रत्येक युद्धमा हामीलाई बँचाउने
यी हिमाल, पहाड, जङ्गल, नदी र मैदानहरू
अहिले भेट्न चाहन्छन् तिमीलाई
तर तिमी हतारमा छौ
प्रत्येक क्षण हामीलाई स्याहार्ने
यी सहर, सडक, चोक, र गल्लीहरू अहिले
छुन चाहन्छन् तिमीलाई
तर तिमी हतारमा छौए अतिथि !
ए यो समयका अन्तिम व्यस्त वैज्ञानिक !
हेर ! तिम्रो पृथ्वी
माइक्रोस्कोपभित्र हल्लिरहेको एउटा बिन्दु
चलिरहेको अमिबा वा अक्टोपसको एउटा कोश
त्यो हो तिम्रो देश-
त्यहाँ तिमी हतारमा छौ ।
फूल दियौं तिमीलाई
नसम्झ ! देवता मान्यौं हामीले
अबिर लगाइदियौं तिमीलाई
नसम्झ ! बिजेता ठान्यौं हामीले
नसम्झ ! शासक सम्झ्यौं
नसम्झ ! सपना सुम्पियौं
ए अतिथि ! ए अतिथि !!
सतीदेवीको मृत शरीर होइन हाम्रो सपना
र, होइनौ तिमी दुर्लभ महादेव
मात्रै स्वागत गर्नु छ तिमीलाई
तिमी हतारमा छौ-
तिमीलाई धेरै टाढा पुग्नु छ ।
तिम्रो तस्बिर सुम्सुम्याएर भावुक हुने छैनौं हामी
तिम्रो श्रव्य-दृष्य वा वृत्तचित्र हेरेर उत्तेजित हुने छैनौं हामी
तिम्रा आविष्कारहरू/तिम्रा महावाणिहरू
ऋचा, मन्त्र वा मुन्धुम केही हुने छैनन् हाम्रा लागि
कुनै सम्झीनुपर्ने दिन हुनेछैन तिम्रो मृत्यु
सती जाने छैन कुनै उज्यालो झन्डा तिम्रो चितामाथि
फेरि भेला हुनेछौं यहीँ/यही समारोहमा
र गर्नेछौं गम्भीर बहस-
'के तिमी साँच्चै हतारमा थियौ...?
कि बिदा गर्न तिमीलाई
हामी हतारमा थियौं ??'
(साभार: कान्तिपुर )
Posted by डिआर निश्छल at 11:08 PM No comments:
-राज लम्साल " यात्री"
यो साथ तिमीलाई यो बात तिमीलाई
कहिल्यै नछुट्ने यो हात तिमीलाई
शंकाले नहेर यो अधरमा मेरो
मन भित्र बिश्वासको खात तिमीलाई
आउ मिल्न अब अङ्गालोमा तिमी
बैशले भरिएको यो मात तिमीलाई
छैन हाम्रो वरिपरि दिवार कतै
जिन्दगीको पहिलो यो रात तिमीलाई
-महारानी झोरा-३, झापा
हाल: अबुदाबी, दुबई
Posted by डिआर निश्छल at 12:47 PM No comments:
भाग लगाई तराजुमा जोखिदै छ देशलाई
लिलामीमा मुल्यहरु तोकिदै छ देशलाई ।
नेता स्वार्थी भए पछी झोलुंगो झै हुँदो रैछ,
हल्लाएर उत्तर-दक्षिण ठोकिदै छ देशलाई ।
आज सम्म जति आए,सबै दुष्ट नेता आए,
खानु खाए नखाएको पोखिदै छ देशलाई ।
जनताले पालेका ति ब्वासोहरु बहुलाएर,
ईन्डिया र चाइनाबाट टोकिदै छ देशलाई ।
श्वास छदैँ एकोहोरो शंखहरु बजाएर,
जबर्जस्ती आर्यघाटमा बोकिदै छ देशलाई ।
Posted by डिआर निश्छल at 12:33 PM No comments:
तिम्रो मनको बाटो हिड्न, अब देखि छोडिदिन्छु
भबिष्यको यात्रा मेरो, अन्तै तिर मोडिदिन्छु
संगै मर्ने संगै बाच्ने ,खाएको कसम संगै
दिल भित्र सजाएको तस्बीर, सबै फ़ोडिदिन्छु
भुल्यौ क्यारे मेरो न्यानो, अंगालोका रातहरु
राजी तिमी छैनौ भने, यो नाता तोडिदिन्छु
सुनेको छु अर्कै संग, सम्बन्ध गास्दै छौ रे
साचो भए अब जीबन, सुन्यतामा जोडिदिन्छु
सक्छौ भने भेट्न आऊ, सम्झनाको छहारीमा
माली बनी टाढैबाट, मनको बगैचा गोडिदिन्छु
हाल: IME मलेसिया
Posted by डिआर निश्छल at 12:12 PM No comments:
विश्वाश /अबिश्वास ,
न्याय /अन्यायको चक्रब्युहमा
मेरो स्वाभिमान आज भोलि
हरेक जनताको अभिमान अनि प्रतिशोधको
चन्द्र,सूर्य छातीमा टाँसेर
केवल ---लाजको पछ्यौरीमा मात्र परिणत छ ।
बिडम्बना हो या सतिको सराप भनूँ ?
युद्धरूपी रणभूमि बनेको छ ।
तान्डव नृत्य हेर्न मात्र बिबश छ
यथार्थ मा नै 'पशुहरुको 'पतिमा मात्र अनुवाद छ ।
'हामी एक हौ 'भन्ने बाणी
'मेरी आमा' 'मेरो देश' भन्ने
भावना र शब्दहरु ईर्ष्या र जलन अनि घ्रिणामा
'निरीह' कोरिएको छ
Posted by डिआर निश्छल at 11:45 AM No comments:
तिम्रो लागि त प्रेम र धनमा धन नै माथि भो प्रिया
बिछोडको चोट अतितको याद यही त मेरो साथी भो प्रिया
मायामा के भिन्नता हुन्छ ? धनी र गरीबको भनी
मन मेरो मारेर गयौ यो त आत्माघाती भो प्रिया
बाचा गरी टुटायौ आँफै तड्पाइमै धकेली दियौ
मेरो बेचैनी देख्दा तिमीलाई त जाती भो प्रिया
न कुनै उदेश्य अब न कुनै योजना मेरो
तिमी बिनाको हरेक पल अन्धकार राती भो प्रिया
हाल : ईराकको मरुभूमिबाट
Posted by डिआर निश्छल at 4:56 AM No comments:
के मेरो अस्तित्व छ ?
मेरो पनि अस्तित्व छ रे यहाँ
किनकि म तोलमोल गरिन्छु
म नजरको गिद्दे दृष्टिबाट पलपल आरपार गरिन्छु
म रङरूपको मापदण्डमा
शरीरको अङ्ग-अङ्ग को गोलाइ अनि लम्बाइमा
म मेरो बैँशको आधारमा
त्यसैले मेरो अस्तित्व छ !
च्याउसे देखि भुसतिघ्रे गिद्धाहरू
मेरो लागि घम्सा घम्सिमा उद्धत रहन्छन्
हाड मासु घोटी
लालाबालाको आँसु, भविष्य अनि जिम्मेवारीलाई लात हान्दै
आफ्नाका विश्वास, समर्पणको चिहानमाथि
लज्जाहीन मुल्यहीन खोक्रो शरीर घिसार्दै
पत्र पत्रमा च्यात्न, चुस्न अनि निचोर्न
आउछन् थुप्रै अनुहारहरु ङिच्छ गर्दै मेरा सामु
किनकी म घर सिगार्ने वस्तु हुँ
ईट पत्थरको घरमा बस्नेहरुको लागि
म सजावटको सामान हूँ
लाजको भारी छ जसको काँधमा
सबैको इज्जत धान्ने डाली हुँ
चाहेको बेला उपस्थित हुनैपर्ने
पत्नी नामक प्राणी हु
किनकी सबैले मलाईनै खोजी खोजी आरोप लगाउँदैछन्
चोक्टा चोक्टा लुछी
अपमानजनक शब्दको हार बोकी
घाउमा नुनचुक दल्दैछन्
'बोक्सी' शब्दले विभुषित गर्दैछन्
अखाद्य बस्तुबाट टन्न अघाउँदैछु म
पिल्साइसकेपछि पनि चित्त नबुझी
खोक्रो यो मंसपेशीय ढाँचालाई जलाउँदै
कहिले दाईजो, कहिले रङ्गरूप अनि कहिले बोक्सीको नाममा
टुक्राटुक्रामा मृत्यु खेपेकोलाई फेरी मार्दैछन्
किनकी मेरो अस्तित्व छ !
खै कहाँ छ मेरो अस्तित्व ?
भो, बन्द गर,
त्यो परिभाषित 'अस्तित्व' मलाई मान्य छैन
खोक्रो शब्दजालको पुजारी चाहिदैन
घृणा छ मलाई
ढुङ्गाको देवीसँग तुलना नगर
जिउदै मर्ने मेरो चाह होइन
तिमीभित्र लुकेको, तिमीभित्र बेरिएको पनि म होइन
तिमी बाहिरको अलग्गै
आकाशकी धर्तिकी एक अंश हुँ म
जहाँ प्रेम, शहिष्णुता, सद्भाव छ
हो, यो 'म' भित्र थुप्रै कुराहरू समाहित हुनसक्छन् सागरझैं
जो आँफैमा चलायमान छ
संपूर्ण छ, अनि अरुलाई सम्पूर्णता दिन सक्छ
जसले सुनामी पनि ल्याउन सक्छ
नलत्याऊ, अनि नविथोल यसलाई
बुझ, अनि अन्तर्मनमा मनन गर
मेरो प्रतिकारलाई सम्मान गर
म तिमी जस्तै 'म' हुँ '
स्त्री, 'महिला' वा 'नारी' जे भन
सृस्टी सम्हाल्ने मानुषी
जसको बेगर कुनै मानवको अस्तित्व छैन
हो, एउटा मौलिक परिचयकी प्राणी
मलाई यसरी चिन र सम्झ, अनि सम्मान गर्न सिक
किनकी मेरो छुट्टै पहिचान छ
नकार्न सक्छौ भने नकार
तर पहिला आफ्नो अस्तित्वको व्याख्या गर ।
-धापासी , काठमान्डौ